travelparis Archives | Page 2 of 2 | Save A tareenka
Safarka uga imaada Rome kuna aadada Paris By Tareenka Sare
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Paris iyo Rome ayaa u sareysa ee liiska baaldi ku dhawaad ​​kasta socotada. Magaalooyinkaas cajiib ah waa caan ah oo dhaqankooda, cunnada-heer caalami ah, naqshadaha fiican iyo si ka badan. Iyadoo Rome iyo Paris kala fogyihiin, waxay si aad u wanaagsan ku xiran yihiin tareen. Taas macnaheedu waxa weeye…
Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani, Tilmaamaha Tareenka Safarka
Interrailing Talooyin Waayo Socdaalka Europe On Miisaaniyadda A
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Interrailing talooyin ku socday miisaaniyad suurto gal ah haddii aad si taxadar leh loo qorsheeyo guura. Qiimaha tikidhada tareenka, hoyga, cuntada iyo madadaalada ha kala duwan yihiin oo u dhexeeya dalalka Yurub, but there are many ways to enjoy a low-cost trip. Nasiib wanaag, diyaarinta qaar ka mid ah, rail travel in…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Haddii aad ku soo guursatay for sano, ama aad weli ku jira marxaladaha hore ee xiriir, lamaane kasta oo ka faa'iidaysan karaan waqti tayo leh wada qaatay. Waa gaar ahaan u fiican in ay sameeyaan dadaal ah Maalinta Jacaylka. Traveling by train is the perfect way to begin…
The Goobaha Best si ay ugu dabaal New Year ee
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo blog ku saabsan meelaha waa in ay u dabaal in style New Year ee safarka tareenka si aad magaalada ugu cadcad Yurub ah fasax aan la ilaawi karin xilliga qaboobaha. Haddii aad raadinayso habeen jaceyl dhaqanka, rashka bandhigay cajiib ama xisbiga ee sannadka, anaga…